Firaketana lavanty Charitybuzz miaraka amin'i Tim Cook sy Apple Park: $ 688.999 | Vaovao momba ny gadget
Firaketana lavanty Charitybuzz miaraka amin'i Tim Cook sy Apple Park: $ 688.999
Efa misy tarehimarika ofisialy amin'ny vola natsangan'ny tranonkala lavanty Charitybuzz, miaraka amin'i Tim Cook no mitarika ny lavanty hisakafoanana amin'ny CEO an'ny Apple ao amin'ny Apple Park ao Cupertino. Amin'ity lavanty ity Ny vola rehetra voaangona dia hatolotra mivantana amin'ny vondrona RFK Human Rights. Raha ny fitsipika, ny ananantsika eo ambony latabatra dia rakitsoratra vaovao momba ny habetsaky ny vola nangonina tao anatin'ny 15 andro naharetan'ity lavanty ity, nahavita nihoatra ny vola avo indrindra azo tamin'ny taon-dasa 2013 tamin'ny vola 610.000 dolara ary betsaka, arak'izay azo atao jereo amin'ny lohateny $ 689.000.
Mihidy ny lavanty ankehitriny. Tamin'ny varotra teo aloha dia tsy nisy safidy natao hisakafoanana antoandro ity miaraka amin'ny CEO an'ny Apple ao amin'ny Campus an'ny orinasa na satria misy an'ity tranga ity ao amin'ny Apple Park vaovao ary ity dia mety ho iray amin'ireo antony naharesy azy io. ny lavanty, ka amin'ny fanontana manaraka dia averin'izy ireo ny fandraisana andraikitra. Ny Apple Park no toerana hanatontosana ny fihaonana eo amin'ny mpamatsy vola avo indrindra sy ny CEO an'ny Apple amin'ity taona ity, ka ity dia zava-baovao ho an'ilay mpandresy tsara vintana.
Tim Cook dia mbola tafiditra amin'ireo karazana antony ireo ary ny marina dia mieritreritra izahay fa tsara. Azontsika atao ny mieritreritra fa amin'ny vola ananan'i Cook, ary io karazana miliardera io dia tsy mila manao hetsika toy izany fa tokony hankasitrahana izany ary mino izahay fa tokony hataon'izy ireo matetika kokoa izany, na dia ireo olona afaka miditra amin'ireo aza ny karazana varotra na mandresy azy ireo dia olona manana fahefana mividy avo koa. Raha fintinina faly izahay amin'ny vola nangonina tamin'ny lavanty ary antenaina hihoatra ny taona lasa io isa io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Firaketana lavanty Charitybuzz miaraka amin'i Tim Cook sy Apple Park: $ 688.999
Ny Samsung Galaxy J5 an'ny 2017 dia efa hita amin'ny tambajotra
Apple dia afaka nijanona ny fivarotana ny mini iPad